I-SP-L05 SOICARE 500ml ye-Ultrasonic yeHumidifier Aromatherapy ebaluleke kakhulu kwioyile yeoyile, China SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwioyile yevumba labavelisi, abaXhasi, abaFektri -Sunpai Industries limited
I-500ml ye-Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Ebaluleke kakhulu kwiArhente yevumba elimnandi
· ISICWANGCISO SE-AROMATHERAPY: Esi sixhobo sokuhambisa ioyile sibaluleke kakhulu yinto engafaniyo nenye into owakha wayisebenzisa. Inento enkulu kwaye kulula ukuyicoca itanki enkulu yamanzi eyi-500ml, imibala e-7 eyahlukeneyo yokukhanya kwe-LED, iimowudi ezininzi ze-mist nebulizer, kunye nokhuseleko oluzenzekelayo olukuthintelayo ukuba lungatshisi kakhulu xa luphuma emanzini.
· Umthamo omkhulu kunye nokuphucula kakhulu umgangatho womoya: ngomthamo weemililitha ezingama-500, oku kulungile kumagumbi amakhulu kwaye ixesha lokusebenza linokufikelela kwiiyure ezili-16. Yisebenzise ukuphucula umoya wasekhaya kunye nomgangatho weatmosfera, gubungela ivumba lezilwanyana zasekhaya okanye ukutshaya, kwaye ukhusele nosapho lwakho kumoya owomileyo, ii-microorganisms, i-allergen nokunye okuninzi!
· I-BPA-FREE PREMIUM QUALITY MATERIALS: Xa kuziwa kwiipremiyamu eziphambili zeoyile, senza inqaku lokungasebenzisi nto ngaphandle kwebakala elifanayo le-ultra-high, ekhuselekileyo, kunye ne-eco-friendly yeeplastiki zeebhotile ezenziwe ngebhotile zabantwana ezenziwe, kunye nelizwe Iinkqubo zokuvelisa ubugcisa kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo.
· ISIBONELELO ESIKHULU SOMNTU WONKE UMNTU: Ukuba usemarikeni ngesipho esihle nesisebenzayo, ungayeka ukujonga. Le aromatherapy enkulu yeoyile yokusasaza sisipho esicingisisiweyo nesisebenzisekayo, esinokuthi wonke umntu azuze kuso. Ngokudityaniswa kwesitayile, uyilo kunye nomsebenzi onje, kukuqinisekiswa okuqinisekileyo komgangatho
aromatherapy ebalulekileyo ioyile diffuser
Inkcazo: DC24V, 13W, 500mA
iadaptha, indebe yokulinganisa
Ukukhanya kobusuku obuthambileyo kunye nobushushu / ukuKhanya okuBala
I-SOICARE 100% yeoyile efanelekileyo yokuNyanga iBakala yeAromatherapy yeoyile yeArhente
I-SP-L09 SOICARE 300ml yeenkozo zomthi ezi-7 Izibane ezikhokelwayo eziyimfuneko kwi-oyile ye-aromatherapy ye-ultrasonic